ရွှေ စံချိန်စနစ် သမိုင်း — Steemkr
ရွှေ စံချိန်စနစ် သမိုင်း
lonesa30 in esteem
*** ရွှေ စံချိန်စနစ် သမိုင်း ***
ရွှေကို ရှေးခေတ်များ အဆက်ဆက်ကတည်းကစပြီး သမိုင်းကြောင်း တလျှောက် ငွေကြေးအဖြစ်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ဘီစီ ၆၄၃ ခုနှစ် အချိန်အခါတုန်းက ကျွန်ုပ်တို့ ယခုလက်ရှိ တူရကီ ဟု ခေါ်ဆိုသော အရပ်ဒေသကို လစ်ဒီယာ (Lydia) ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ လစ်ဒီယာ နောက်ဆုံးမင်းတစ်ပါးဖြစ်သော ခရီးဆက်(Croesus)မင်းလက်ထက်တွင် (ဘီစီ ၅၆၀) လစ်ဒီယာလူမျိုး တို့က ရွှေကို ဒင်္ဂါးသွန်းလုပ်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ခရီးဆက်မင်း ရွှေအများအပြားပိုင်ဆိုင်သည်ကို အစွဲပြု ၍ ယနေ့ခေတ် လူချမ်းသာကြီး များကိုလည်း 'rich as Croesus' ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်အခါတွင်လည်း ရွှေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံများသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝ သော နိုင်ငံများ အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၁၈၄၈ ခုနှစ်က မွေးမြူ ရေးခြံတစ်ခု၌ တူးဆွမှု ပြု လုပ်ခဲ့ရာမှ ရွှေကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအုံးအုံးကျက်ကျက် ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်။ ရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု များဖြစ်ပေါ် စေခဲ့ပြီး အနောက်အမေရိက ဒေသ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင်တော့ အမေရိကန်ငွေတိုက်ဌာန အတွင်းရေးမှူးဆဲလ်မွန်ချိ (စ်) က အမေရိကန်သုံး ငွေစက္ကူ ကို စတင် ရိုက်ထုတ်သုံးစွဲစေခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်တော့ ၁၈၀၀ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က နိုင်ငံအတော်များများတွင် ကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်၌ ဖောင်းပွမှု များ ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့သောကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကို စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ရန် နည်းလမ်းရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ ရွှေ စံချိန်စနစ်ကို တွေ့ရှိသွားခဲ့သည်။ အစိုးရက ငွေစက္ကူ များကို ရိုက်ထုတ်ပေးပြီး ရွှေ နှင့် လဲလှယ်သုံးစွဲနိုင်ကြောင်း အာမခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် ရွှေတုံး၊ ရွှေခဲများကို သယ်ယူစရာ မလိုတော့ဘဲ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေခဲ့သည်။ မကောင်းသည့် အချက်ကတော့ ရွှေ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများ မှ ရွှေများထပ်မံတူးဖော်ရရှိသည့် အခါတိုင်း ရွှေ ဈေးနုန်းရော ငွေစက္ကူ တန်ဖိုးရော ကျဆင်းလေ့ရှိသည်။
၁၉၁၃ ခုနှစ်ရောက်သည့်အခါတွင်တော့ ရွှေနှင့် ငွေစက္ကူ တန်ဖိုးခိုင်မာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှ အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် (Federal Reserve) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၄င်းတို့ မျှော်မှန်းထားသော ရွှေစံချိန်စနစ်ကြီး စတင် အသက်ဝင်ပြီး ခိုင်မာမှု မဖြစ်ပေါ်သေးခင် ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးနှင့် ကြုံ တွေ့ခဲ့ ရသည်။ ထိုအချိန်၌ ဥရောပဗဟိုဘဏ်ကတော့ စစ်စရိတ်အတွက် အသုံးစရိတ်လိုအပ်သောကြောင့် ရွှေစံချိန်စနစ်ကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ခဲ့ပြီး ငွေစက္ကူ များ လုံလောက်အောင် ရိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဟိုက်ပါအင်ဖလေးရှင်း ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ စစ်ပြီးကာလမှာတော့ ရွှေစံချိန်စနစ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံ၍ သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
Great Depression ဖြစ်စဉ်ကာလတွင် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ရွှေစံချိန်စနစ်ကို ကတုံးတုံးချင်ခဲ့ကြပြန်သည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် စတော့ဈေးကွက်ပြို ကွဲစဉ်ကာလတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတို့သည် ငွေကြေးနှင့် အခြားကုန်စည်များတွင် စတင် အရောင်းဝယ်လုပ်လာကြသည်။ ၄င်းတို့၏ ရွှေနှင့် ဒေါ်လာလဲလှယ်ခြင်းစနစ်သည် ရွှေဈေးနုန်းမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ဒေါ်လာများကို များများထုတ်ပေးလာကြရခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအခါ ဘဏ်များ ပြိုလဲခဲ့ရသည်။ လူတွေကလည်း ငွေစက္ကူ အပေါ် ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးကုန်ကြပြီး ရွှေကို ဝယ်စုခဲ့ကြသည်။
ထိုအခါ Fed ဗဟိုဘဏ်မှ ဘဏ်အတိုးနုန်းများတိုးမြင့်ခဲု့ပြီး ဒေါ်လာတန်ဖိုးကို ဝင်ရောက်ထိန်းညှိပေးရသည်။ ထိုအချိန်က Fed သည် လူအများ ဒေါ်လာကို ပစ်ခါခြင်းမှ တားမြစ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းပြု လုပ်ခဲ့သော်လည်း အတိုးနုန်းမြင့်ခြင်းသည် စီးပွားရေးကျဆင်းခြင်းကို ပို၍ ပင် ဆိုးဝါးသွားစေခဲ့သည်။ အတိုးနုန်းမြင့်သောအခါ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားစေပြီး ကုမ္ပဏီ အများအပြားဒေဝါလီခံခဲ့ရကာ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ သမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည့် အဖြစ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
၁၉၃၃ ခုနှစ်မတ်လ ၃ရက်နေ့ တွင်တော့ အမေရိကန်သမ္မတ ရုစဗဲ့ လက်ထက်တွင် ဘဏ်များကို ပိတ်ထားစေခဲ့ပြီး နယူးယောက်မြို့ရှိ Fed ဗဟို ဘဏ်တွင် ရွှေအရန်ထားရှိမှု စတင်လုပ်ဆောင်စေခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင်တော့ ဘဏ်များကို ပြန်ဖွင့်စေခဲ့ပြီး ၄င်းဘဏ်များရှိ ရွှေများကို Fed ဗဟိုဘဏ်တွင် အပ်နှံစေခဲ့သည်။ ရွှေ နှင့်ဒေါ်လာလဲလှယ်ပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ မည့်သည့် ရွှေတင်ပို့မှုများကိုမှ ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ ဧပရယ်လ ၅ ရက်နေ့မှ သမ္မတရုစဗဲ့ အမိန့်ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ၄င်းတို့၏ ရွှေများကို ဒေါ်လာဖြင့် လဲလှယ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အခြားသောကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများက အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ရရှိရင် ရွှေဖြင့် အလဲအလှယ်ပြုလုပ်လာကြသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ရရှိသော ရွှေများကို ကင်တပ်ကီပြည်နယ်ရှိ Fort Knox အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ များမကြာမီ ကာလတွင် အမေရိကန်သည် ကမ္ဘာ့ရွှေအရန်စုဆောင်းမှု အများဆုံးရှိသော နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၃၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက်နေ့တွင် Gold Reserve အက်ဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပြီး လိုင်စင်ရရှိထားသူများမှအပ ပုဂ္ဂလိက ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဥပဒေထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ အပေါ် ပေးရန်ရှိသော ကြွေးမြီတို့ကို အစိုးရမှ ဒေါ်လာငွေသားဖြင့်သာ ပေးရန်လိုတော့သည်။ သမ္မတ ရုစဗဲ့ အမိန့်အရ ရွှေဖြင့်လဲလှယ်နိုင်သော ရွှေဒေါ်လာတန်ဖိုးကို ၄၀% တန်ဖိုးလျှော့ချခြင်းပြု လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပြု လုပ်ခြင်းဖြင့် ရွှေတန်ဖိုးကို တက်စေခဲ့သည်။ ရွှေ တစ်အောင်စ ဒေါ်လာ ၂၀.၆၇ ရှိရာမှ ၃၅ ဒေါ်လာတက်လာခဲ့ပြီး ရွှေအရန်ထားရှိမှု တန်ဖိုးစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄.၀၃၃ ဘီလီယံရှိရာမှ ဒေါ်လာ ၇.၃၄၈ ဘီလီယံထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လာတန်ဖိုးကို ၆၀ % ခန့် ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၄ ခုနှစ်ရောက်သည့်အခါ ဘရက်တန်ဝုဒ် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ရွှေ တစ်အောင်စလျှင် ၃၅ဒေါ်လာ သတ်မှတ်၍ ဒေါ်လာကို ရွှေကျောထောက်နောက်ခံထားသော ရွှေစံချိန်စနစ်ကို စတင်သုံးစွဲစေခဲ့သည်။ အမေရိကန်သည် ရွှေ အများဆုံးလက်ဝယ်စုဆောင်းထားသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အခြားနိုင်ငံများမှာ ဒေါ်လာကို လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် အစားထိုးပေးစရာ ရွှေလုံလောက်စွာမရှိကြသော အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်။ Fed ဗဟိုဘဏ်ကလည်း ရွှေနှင့် ဒေါ်လာလဲလှယ်နုန်းကို နုန်းသေထားခြင်းသည် တစ်ဖက်နိုင်ငံအတွက် အကြပ်အတည်းဖြစ်လာစေသည်။ ထိုအခါ ဒေါ်လာနှင့် အခြားသော နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးများချိတ်ဆက် လဲလှယ်ခြင်းပြု လုပ်ခဲ့ရာမှ ယနေ့ ငွေကြေးဖလှယ်ခြင်း ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
* ရွှေစံချိန်စနစ်ပျက်သုဉ်းခြင်း *
၁၉၆၀ ခုနှစ်ရောက်သည့်အခါ အမေရိကန်၏ ရွှေအရန်ထားရှိမှု သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွင်ထားရှိသောဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံအပါအဝင် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၉.၄ ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ တွင်ရှိသော ဒေါ်လာအရန်စုဆောင်းမှု အားလုံးပေါင်းမှာဒေါ်လာ ၁၈.၇ ဘီလီယံသာရှိသဖြင့် လုံလောက်သော အကာအကွယ်ဖြစ်စေသည်။ ရေနံထွက်ရှိမှု အများဆုံးဖြစ်သော ဆိုဗီယက်နိုင်ငံများမှ ရေနံတန်ဖိုးကို ဒေါ်လာဖြင့် စတင်သတ်မှတ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြု ခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ ဒေါ်လာသည် နိုင်ငံတကာ အရန်စုဆောင်းငွေ အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၄င်းနောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာကြီးစိုးမှု ကို စိုးရိမ်လာ၍ ဥရောပဘဏ်များပေါင်းစည်းကာ ယူရို ငွေကြေးကို ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်ရောက်သည့်အခါ အမေရိကန်၏ ရွှေ အရန်ထားရှိမှု ဒေါ်လာ ၁၄.၅ ဘီလီယံသာရှိတော့ပြီး နိုင်ငံတကာတွင် ဒေါ်လာအရန်စုဆောင်းထားမှု ဒေါ်လာ ၄၅.၇ ဘီလီယံပမာဏထိ များပြားလာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သမ္မတ နစ်ဆင်လက်ထက် စီးပွားရေးပေါ်လစီမှားယွင်းစွာ ချမှတ်မှု ကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖောင်းပွမှု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယူရိုနှင့် လဲလှယ်နုန်းတွင် ၂ ဆမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဘဏ်များက ဒေါ်လာကို ရွှေနှင့် အစားထိုးလဲလှယ်ပေးမှု များလုပ်ဆောင်ပြီး ဒေါ်လာတန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သော်လည်း ရွှေရှားပါးပြတ်လပ်ကုန်မည်စိုး၍ အချိန်အတော်ကြာ မထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပေ။
၁၉၇၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် သမ္မတ နစ်ဆင်က ဒေါ်လာနှင့် ရွှေ တန်ဖိုးကို ၃၅ ဒေါ်လာမှ ၃၈ ဒေါ်လာသို့ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အချိန်ကြာ လဲလှယ်ပေး၍ မရနိုင်။ ထိုအခါ ရွှေစံချိန်စနစ်ကြီးသည် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ လာပြီဖြစ်သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်တော့ အမေရိကန်အစိုးရက ရွှေ တစ်အောင်စ ကို ၄၂ ဒေါ်လာ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပြန်သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်အထိသာ ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး ၄င်းနောက်ပိုင်း ရွှေ ဈေးကွက်ထဲတွင် ရုတ်တရက် တစ်အောင်စကို ဒေါ်လာ ၁၂၀ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ရွှေ စံချိန်စနစ်ကြီး ပြို ကွဲခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများသည် ငွေစက္ကူ များကို များများစားစားရိုက်ထုတ်ဖို့ အခွင့်လမ်း ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့ပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြသည်။ ငွေတန်ဖိုး တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျ လာပေမယ့်လည်း ရွှေ တန်ဖိုးကတော့ မကျဘဲ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထို့ နောက် ငွေကြေး အလွန်ကျွံ ဖောင်းပွခြင်း (သို့) ရီဆက်ရှင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ကာလများတွင် ရွှေကို ဝယ်စုလာကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရွှေဈေးနုန်းသည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အမြင့်ဆုံးဈေး တစ်အောင်စကို ၁၉၁၆.၂၀ ဒေါ်လာထိ မြင့်တက်ခဲ့ဖူးသည်။
ရွှေစံချိန်စနစ် စ သည်မှ ဆုံး သည်ထိ
အကျဉ်းချုပ် မျှ ဝေရေးသားလိုက်ရပါတယ်ရှင်
esteem good-karma gold history knowledge
Congratulations @lonesa! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @lonesa! You receivedapersonal award!